मेरो गन्थन: 2009
Posted by inashrestha at 1:22 AM3comments:
Posted by Chandra at 11:41 AM 1 comment:
संपूर्ण ब्लगर मित्र तथा पाठकहरुलाई विजया दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै माया र सद्भाव राखीरहौं ।
विजया दशमीको उपलक्ष्यमा लबक, टेक्सासका नेपाल विद्यार्थी संगठनको आयोजनामा रीना र मनीष द्वारा प्रस्तुत नेवारी नृत्य ।
Posted by inashrestha at 6:12 PM No comments:
Posted by inashrestha at 4:35 PM No comments:
आहा कति सुन्दर छन यि तस्विरहरु । तस्विरमा देखिएको मानिसको कलाकारिता र सिर्जना आफैंमा लोभ लाग्दा छन । त्यसमाथि यसलाई जोगाई राख्न कति मिहिनेत र परिश्रम परेको छ हामी आफैं अंदाज गर्न सक्छौं । ईमेलबाट प्राप्त यि तस्विरहरुले मलाई प्रभावित तुल्यायो, बरु तपाईंहरुलाई कस्तो लाग्यो कुन्नि, अनुभव बाँड्नु होला । कसैलाई यि तस्विरहरु कहाँ खिचिएको हो थाहा भए लेख्नु होला । मसँग अहिले यसको बारेमा धेरै जानकारी भएन, क्षमा चाहन्छु । धन्यवाद !
Posted by inashrestha at 12:00 AM2comments: